Hagitaanada iyo Xaddidaadaha COVID-19 ee hadda jira - King County
af Soomaali— Somali
Hagitaanada iyo Xaddidaadaha COVID-19 ee hadda jira
King County waxay ku jirtaa Wejiga 3aad ee qorshaha Caafimaadka gobalka Washington - Ku wajahan qorshaha Soo-kabashada
Wejiga 3aad: Makhaayadaha iyo dukaamada waxay u adeegi karaan macaamiil badan
King County waxay ku jirtaa Wejiga 3aad ee qorshaha Caafimaadka Washington - Ku wajahan qorshaha Soo-kabashada, taas oo u oggolaanaysa hawlo badan inay dib u bilowdaan, oo ay ku jiraan imaanshaha qofka dhacdooyinka xirfadleyda, isboortiga kulleejka iyo dugsiga sare. Ganacsiyada, maqaayadaha, jiimamka, iyo matxafyada ayaa loo oggolaan doonaa inay ku kordhiyaan xajmiga 25 boqolkiiba illaa 50 boqolkiiba.
Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qorshaha Caafimaadka Washington, fadlan booqo goobta Gudoomiyaha Caafimaadka Washington. (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya)
Markaan la kulanno noocyo badan oo ah cuduro faafa (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya), cusubna waa inaan feejignaano waligeen si ganacsiyada ay u sii furnaadaan kiisaska COVID kana hoos ugu sii dhacayaan. Marka lagu daro xirashada maaskarooyin kula eg iyo kala fogaynta bulshada, Haayada Caafimadka ee Dadweynaha- Seattle iyo King County waxay ku dhiirrigelineysaa ganacsiyada iyo xarumaha ka shaqeeya gudaha inay mudnaanta siiyaan hawo-qaadashada iyo qulqulka hawada (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya), oo lagu daray banaanka, meelaha laga baxo iyo bixinada alaab qaadashada.
U hel dhaqaale iyo dib-u-furid ilaha goobaha shaqada, ururada ku dhisan bulshada iyo diinta, dugsiyada iyo daryeelka carruurta. (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya)
Wejiga 3aad - Caafimaadka Washington
Halkan ka aqri hagitaanka oo faahfaahsan (Websaydhka waxa ku qoran luuqada Ingiriiska kaliya).
La cusbooneysiiyay 22-kii Maarso
Tirada isu imaatinka goobaha bulshada iyo guriga – meel gudaheed lagu qabto
Ugu badnaan 10 qof oo ka baxsan qoyskaaga.
Tirada isu imaatinka goobaha bulshada iyo guriga - meel bannaan ah lagu qabto
Ugu badnaan 50 qof.
Dadka ugu badan ee gudaha ku cibaadaysan karta waa 50% inta ay qaado.
Dukaamada tafaariiqda (waxaa ka mid ah suuqyada beeraleyda, dukaamada raashinka iyo qutul yoomka gada, farmashiyada)
Dadka ugu badan 50% inta ay qaado, ku dhiirrigeli alaab qaadashada.
Adeegyada xirfadeedleyda ay bixisp
Shaqada oo lagu qabto qaab masaafo ayaa si xoogan loo dhiirigaliyaa, 50% inta ay qaado.
Xarumaha wax laga cuno iyo kuwa laga cabo (xarumaha kaliya ee u adeega shaqsiyaadka 21 + aana jirin cunno soo harto oo la xirayo)
Cunnada gudaha lagu cunno waxaa laga heli karaa 50% inta ay qaado, iyo adeegga khamriga/geynta 12 AM. Meelaha cunada bannaanka ama hawo furan leh oo la heli karo, ugu badnaan 10 miiskiiba.
AAroosyada iyo aaska
Xafladaha iyo soo dhaweynta gudaha, hawlaha aaska, ama isku imaatinnada la midka ah ee lala xiriiriya xafladaha noocaas ah waa la ogol yahay waana inay raacaan shuruudaha goobta ku habboon. Haddii cuntada ama cabitaannada la bixiyo, shuruudaha cunidda iyo cabbitaanku way khuseeyaan. Qoob-ka-ciyaarka waa mamnuuc.
Xarumaha madadaalada iyo jimicsiga (oo ay kujiraan jiimamka, ururada jimicsiga, isboortiga madadaalada gudaha, barkadaha gudaha, isboortiga gudaha ee K-12, isboortiga gudaha, tababarka shaqsiga ee gudaha, qoob ka ciyaarka gudaha, farshaqanka taabasha la'aant ah, jimicsiga, fuulitaanka)
Tartamada isboortiga iyo tartamada loo oggol yahay dhammaan qaybaha halista. Jimicsiga iyo tababarka iyo isboorti gudaha ah ugu badnaan 50% inta ay qaado. Maydhashada waa la oggol yahay.
Isboortiga banaanka iyo goobaha jimicsiga (ururada jimicsiga banaanka, isboortiga madadaalada banaanka, barkadaha banaanka, jardiinooyinka banaanka iyo tamashlaha socodka, kaamamka banaanka, isboortiga K-12 ee banaanka, isboortiga banaanka, tababarka shaqsiga ee banaanka, qoob ka ciyaarka banaanka, isboortiga mootooyinka banaanka)
Tartamada isboortiga iyo tartamada loo oggol yahay dhammaan qaybaha halista. Daawadeyaasha ugu badan ayaa loo oggol yahay 400 oo leh xaddidaadda dhanka intay qaado iyadoo kuxiran xarunta. Hawlaha la hagayo waa la oggol yahay iyadoon koofiyado adag la saarin xayiraad.
Xarumaha madadaalada ee gudaha (waxaa ka mid ah biyaha, tiyaatarada gudaha, aagaga gudaha, hoolalka xafladaha gudaha, jardiinooyinka gudaha, matxafyada gudaha, bowling-ka gudaha, tas-hiilaadka gudaha lagu boodo, meesha kaararka lagu ciyaaro ee gudaha, waxqabadyada madadaalada ee gudaha nooc kasta ha noqotee)
Inta ugu badan ee ah 50% inta ay qaado ama 400 qof, hadba kii yar. Haddii cuntada ama cabitaannada la bixiyo, shuruudaha cunidda iyo cabbitaanku way khuseeyaan.
Xarumaha madadaalada dibada (oo ay kujiraan meelaha lagu xanaaneeyo xayawaanada, jardiinooyinka banaanka, biyaha banaanka, tiyaatarada banaanka, garoomada banaanka ah, meelaha xafladaha lagu qabto ee banaanka ah, goobaha banaanka, goobaha ciyaraha banaanka lagu qabto, meelaha ciyaaraha fardaha lagu qabto)
Tigidhada qofka ka soo gatay xarunta waa la ogol yahay iyadoo leh xayiraad. Daawadeyaasha ugu badan ayaa loo oggol yahay 400 oo leh xaddidaadda inta ay qaado ah iyadoo kuxiran xarunta.
Xusuusin: Madadaalada tooska ah lama mamnuucayo laakiin waa inay raacdaa hagista kore ee goobta ku habboon. Xarumaha bixiya daryeelka muddada-dheer, isboortiga xirfadleyda iyo kulleejooyinka ah ayaa lagu xukumaa hagitaankooda/baaqyadooda hadda ee ka duwan qorshahan.